Ciidanka nabad-sugidda oo holwgal aan caadi ahayn ka sameeyay xaafadaha degmada Wadajir ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka nabad-sugidda oo holwgal aan caadi ahayn ka sameeyay xaafadaha degmada Wadajir ee Muqdisho
Ciidamada nabad-sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay ilaa saakay howlgal aan caadi ahayn ka sameeyay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Howlgalkaasi oo inta badan laga sameeyay xaafadaha ku yaala degmada Wadajir ayaa la sheegay in lagu soo qabtay ku dhawaad 20 ruux oo ay ciidanka uga shakiyeen inay xiriir la leeyihiin Xarakada Al-shabaab.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo sheegay in ciidanka nabad-sugidda qaranka ay baaritaano ku sameeyeen guryaha ku yaala degmada Wadajir, islamarkaana baaritaanadaasi lagu soo qab-qabtay dad looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab.
“Walaaloow, habeenkii xalay anagoo seexanay ayaa waxaa halmar ka war-helnay ciidamada oo guryaha nagu soo galay, waxayna inoo sheegeen inay raadinayaan dad xiriir la leh Al-shabaab, ma jirin cid ay ciidankaasi dhib u geysteen, waxayna hore u kaxeysteen dad ka badan 20 ruux, kadibna wey baxeen” Sidaasi waxaa yiri mid kamid ah dadka ku dhaqan xaafadda howlgalkaan laga sameeyey oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn.
Dhinaca kale, ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka degmada Wadajir, kaas oo ay kaga warbixinayaan howlgalkaan dadka badan lagu soo qab-qabtay oo laga sameeyay xaafadaha ku yaala degmada Wadajir.
Si kastaba ha ahaatee, howlgalkaan ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay laba nin oo bistoolado ku hubeysan ay degmada Wadajir ku dileen nin Oday ah oo ka mid ahaa waxgaradka degmadaasi, iyadoo gelinkii dambe ee shalay saxaafadda loo soo bandhigay labadaasi nin oo la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidanka ammaanka ee degmadaas.